Isilimela 14, 2018 admin
Paxos inkampani crypto wongeza inkonzo eluvalelweni mveliso yeziko
Paxos likwaqhuba crypto lotshintshiselwano kunye phezu-the-counter kwedesika sorhwebo, kwaye ujonge ukuba Ukulawula ishishini layo crypto-eluvalelweni lokulukuhla imithamo zorhwebo kwindawo yayo.
Yinto intshukumo nguPawulos Ciavardini, umlawuli ongumqondisi iOTC trading ekuqaleni, siqinise, uthi ibukeka ifana twatse nendlela Goldman wanikela iinkonzo labarhwebi inkulumbuso ukuba kuyibiyela imali leyo yaba iingeniso ezinkulu ishishini yalo yorhwebo.
“Ndibona ishishini lokukhulisa ukwenza into efana apha [koko Goldman wenza],” Ciavardini uthe. “Kusebenza nomjelo aze aguqulele nakwishishini kwicala sorhwebo nokutshintshiselana. Yinto nje konke malunga nokufumana ndonwabile kunye nokugcinwa.”
ABANTU abaninzi market baye bathi ukuze mveliso omkhulu kwamaziko ukufumana urhwebo ukhululeke Bitcoin, Kufuneka kubekho iminikelo eluvalelweni owaziwayo okukhusela iifama.
Paxos’ esiphezulu uCharles Cascarilla uthe kwedesika iOTC ubona onamanani ezisithoba kuyo.
State of New York ikhupha BitLicense ukuba inkampani yokugcina Bitcoin
Isebe Iinkonzo zeMali New York wabhengeza ukuba ayenike yelizwe ilayisensi idesktop ukuya Xapo inc. iinkonzo zemali inkampani yedijithali ezifundisa iimveliso Bitcoin kunye neenkonzo.
“Xapo kuya kugunyaziswa ukunikela isipaji kunye nenkonzo isiqulathi yedijithali, leyo yenzelwe nje indlela ekhuselekileyo zeinshorensi ukugcina bitcoins” le ncwadi ithi.
ItBit Exchange wongezelela 4 cryptos ezintsha kubatyali-mali
Cryptocurrency exchange itBit ithi sele sivunyiwe liSebe New York yeSebe likaNondyebo (NYDFS) ukubandakanya cryptocurrencies ezine eziphambili kwiinkonzo zayo zorhwebo kunye nokugcinwa.
Ngaphandle Bitcoin, Ngoku itBit izakunika ilungelo, Escrow naphezu-the-counter (Acute) kwiinkonzo zorhwebo ku Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) kunye lumens ogcwele (XLM) yokuthengisa platform ukulandela, ngokutsho ukukhululwa press ,
Njengoko inkampani yokuqala evunywe yi NYDFS njenge cryptoexchange onemvume New York-based, wokwamkelwa yalo yakutshanje iye yabeka imigangatho emitsha namaqonga zotshintshiselwano amandla kuloo meko.
«Sizimisele ekukhuleni kunye nasekusungulweni kwale eziphilayo,»Wathi uCharles Cascarilla, CEO kunye nentsebenziswano umseki itBit.
Ethetha ulwalamano lenkampani kunye DFS, Carcarilla CoinDesk uthe i email “DFS iye ekubumbeni kakhulu kwindlela ngayo wakukhangela ecosystem crypto-asethi” kwaye lwaba bubheke phambili kwintsebenziswano okuqhubekayo kwixesha elizayo.
Xa zokuthiywa ngokutsha in 2016, le nkampani saguqulelwa igama Paxos, ngoxa kwaqhutywa itBit uphawu kuphela ishishini irandi. ItBit nangoku isebenza njenge icandelo elahlukileyo abanye swi phambili iiprojekthi blockchain zabucala ezifana bankchain.
Nje ngenyanga edlule, Paxos bagqiba $ 65 million Series B round mali ekhokelwa zimali ezikhoyo ezifana Liberty City Ventures, RRE Ventures and Jay Jordan.
Njengoko cryptocurrency umnikelo ezahlukeneyo kwiinkonzo zorhwebo, ilayisenisi itBit eyandisiweyo kulindeleke ukuba “iingcango ezivulekileyo ukuze abantu kunye namaziko ukuba ukufikelela asethi crypto ngaphaya Bitcoin,” Andrew wathi Chang, COO of itBit
Ingxelo Daily Market Kraken for 13.06.2018
$273M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Post Previous:Blockchain News 13.06.2018
Post Next:Blockchain News 15.06.2018
Isilimela 17, 2018 e 5:27 PM
Sylvester Goldrup uthi:
Isilimela 19, 2018 e 10:09 AM
EyeThupha 20, 2018 e 4:31 PM
Howdy I am so delighted I found your website, I really found you by error, kanti